PowerChord: Maaraynta Hogaanka Maxaliga ah ee Dhexe iyo Qaybinta Summadaha Qaybay Iibiyaha | Martech Zone
PowerChord: Maaraynta Hogaanka Maxaliga ah ee Dhexe iyo Qaybinta Summadaha Qaybsan ee iibiyaha
Isniin, Disembar 27, 2021 Isniin, Disembar 27, 2021 Stephanie Shreve
Noocyada waaweyni waxay helayaan, qaybo badan oo dhaqdhaqaaqa ayaa muuqda. Noocyada lagu iibiyo shabakado ganacsi oo maxalli ah waxay leeyihiin hadafyo ganacsi oo aad u adag, mudnaanta, iyo khibradaha khadka si loo tixgeliyo - laga soo bilaabo dhinaca astaanta ilaa heerka deegaanka.
Noocyada waxay rabaan in si fudud loo ogaado oo loo iibsado. Ganacsatadu waxay rabaan hogaan cusub, taraafikada cagta oo badan, iyo iibka oo kordha. Macaamiishu waxay rabaan xog ururin iyo waayo-aragnimo iibsi aan khilaaf lahayn - waxayna u rabaan si degdeg ah.
Hogaamiyeyaasha iibka ee suurtogalka ah waxay ku soo baxaan uumi biqilka isha.
Haddii ganacsatadu gaadho shan daqiiqo gudahood iyo 30 daqiiqo, jaanisyada ku xidhidhiyaha tooska ah waxay hagaajinaysaa 100 laab. Fursadaha hogaanka ee lala xiriiro shan daqiiqo gudahood ayaa booday 21 jeer.
Iibinta Khayraadka leh
Dhibaatadu waxay tahay in dariiqa wax lagu gadanayo ay tahay mid aad u degdeg badan ama aan u kala jabnayn badeecadaha iibiya. Maxaa dhacaya marka macmiilku ka tago bogga internetka ee summada si taxadar leh loo habeeyey si uu u baadho halka laga iibsanayo gudaha? Leedhkaas miyuu u rogay iibiyaha maxaliga ah mise waxay ku ururisay boodhka sanduuqa boostada? Intee in le'eg ayay si dhakhso ah u dhacday dabagalka - haddiiba?
Waa waddo sida caadiga ah ku tiirsan dukumentiyada dabacsan iyo hababka aan is waafaqsanayn. Waa waddo ay ka buuxaan fursado la lumiyay dhammaan daneeyayaasha.
Waxaana lagu bedelayaa automation software.
Dulmarka Platform PowerChord
PowerChord waa xal SaaS ah oo loogu talagalay noocyada iibiyaha iibiya ee ku takhasusay maareynta hogaanka deegaanka iyo qaybinta. Xarunta dhexe waxay isu keentaa agabka CRM ee ugu awooda badan iyo hawlaha warbixinta si loo kordhiyo hogaaminta heerka deegaanka iyada oo loo marayo otomaatig, xawaaraha, iyo falanqaynta. Ugu dambayntii, PowerChord waxay ka caawisaa summadaha inay dhisaan cilaaqaadyo ay la yeeshaan macaamiishooda iyagoo ka bilaabaya shabakadooda iibiyaha, markaa wax rasaas ah oo aan leexleexan ma jirto.
Maaraynta Hogaaminta Powerchord iyo Qaybinta
Summadaha iyo iibiyayaashu labaduba way isticmaali karaan PowerChord's Xarunta Taliska. Iyadoo loo marayo Xarunta Taliska, calaamaduhu waxay si toos ah u qaybin karaan hogaanka - meel kasta oo ay ka yimaadeen - ganacsatada maxalliga ah.
Ganacsatadu waxay awood u leeyihiin inay u rogaan hogaanka iibka. Ganacsade kastaa waxa uu heli karaa agabka maaraynta hogaanka si uu u maareeyo dhuunta iibka ee deegaankooda. Dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya meheradda waxay heli karaan macluumaadka horseedka ah si ay u dedejiyaan xidhiidhka ugu horreeya oo ay kordhiyaan suurtogalnimada iibka. Sida horumarku u horseedayo marinka iibka, ganacsatadu waxay ku dari karaan qoraalo si qof kastaa ugu sii jiro isla bogga.
Warbixinta hogaaminta maxaliga ahi waxay ku socotaa astaanta si ay hogaanka iibku si sahal ah ula socdaan horumarka dhamaan goobaha.
Maadaama xidhiidhka degdega ahi uu fure u yahay xidhitaanka iibka, dhammaan qalabka PowerChord ayaa mudnaanta siinaya xawaaraha. Summadaha iyo ganacsatada waxaa lagu wargeliyaa hoggaan cusub isla markiiba - oo ay ku jirto SMS. Tani waxay caawinaad weyn u noqon kartaa shaqaalaha deegaanka ee aan sida caadiga ah ku xidhnayn miiska iyo kombayutarka maalinta oo dhan. PowerChord ayaa sidoo kale dhawaan soo bandhigtay Hal Click Actions, oo ah muuqaal u oggolaanaya isticmaaleyaasha inay cusboonaysiiyaan heerka hoggaanka iimaylka ogeysiiska iyagoon u baahnayn inay galaan Xarunta Taliska.
Falanqaynta Powerchord iyo Warbixinta
PowerChord waxay udub dhexaad u dhigtaa warbixinta si kor loogu qaado dadaalka iibka gudaha ee summadaha. Waxay arki karaan isdhexgalka hogaanka ganacsadaha maxalliga ah - oo ay ku jiraan gujis-si-wacitaan, dhagsiin tilmaamaha, iyo soo gudbinta foomka hogaanka - hal meel oo arag sida ay u socdaan waqti ka dib. Dashboard-ku wuxuu kaloo u oggolaanayaa suuq-geynta inay cabbiraan isbeddellada dukaamada maxalliga ah, sida badeecadaha ugu waxqabadka sarreeya, bogagga, iyo CTA-yada, oo ay qiimeeyaan fursadaha cusub ee beddelidda.
Sida caadiga ah, warbixintu way soo baxaysaa - taasoo la micno ah in ganacsade kastaa arki karo oo keliya xogtooda, maareeyayaashu waxay arki karaan xogta goob kasta oo ay mas'uul ka yihiin, ilaa aragtida caalamiga ah ee ay heli karto astaanta. Ogolaanshaha waxaa loo qaabayn karaa si loo xaddido gelitaanka xogtan haddii loo baahdo.
Suuqgeeyayaasha calaamaduhu waxay sidoo kale heli karaan aragti ku saabsan sida ololeyaasha suuqgeynta maxalliga ah ay u fuliyaan, oo ay ku jiraan kharashka wada hadal kasta, gujisyada, beddelka iyo yoolalka kale. Falanqaynta PowerChord iyo sifada Warbixinta ayaa isku xidha dhibcaha u dhexeeya hogaanka iyo dakhliga, taas oo u ogolaanaysa summadaha inay yidhaahdaan:
Dadaalladayada suuqgeynta dhijitaalka ah ee lagu lammaaniyey maaraynta hogaanka iyo dadaallada qaybinta ayaa gacan ka geystay $50,000 dakhli; 30% ka mid ah taasi waxay isu rogtay iib, taasoo keentay 1,000 hoggaan bishii hore.
Isku soo wada duuboo tan oo dhan: Grasshopper Mowers waxay isticmaashaa PowerChord si ay u wanaajiso mareegaha iibiyaasha maxalliga ah waxayna kordhisaa hogaaminta 500%
Goynta cawska waa soo-saare warshado-jareyaal heer-ganacsiyeed ah oo si gaar ah loogu iibiyo shabakad ku dhow 1000 ganacsato madax-bannaan oo waddanka oo dhan ah. Shirkaddu waxay ogaatay inay jirto fursad ay ku soo jiidato macaamiil cusub oo ay ku kobciso saamigeeda suuqa. Fursaddaas waxay ku jirtay gacanta ganacsatada maxalliga ah.
Markii hore, markii macaamiisha suurtagalka ah ay sahamiyeen khadadka alaabada ee shabakada Grasshopper, fursadaha iibka ayaa la qasi jiray marka ay soo galaan goobaha iibiyaasha maxaliga ah. Summaddii Grasshopper ayaa la waayay, goobaha iibiyayaashuna waxay muujiyeen khadadka qalabka tartanka oo ka maqan macluumaadka dukaanka gudaha, taasoo keentay jahawareer macmiilka. Natiijo ahaan, ganacsatadu waxay luminayeen aragtida hogaanka ay bixiyeen waxayna ku dhibtoonayeen inay xidhaan iibka.
Muddo lix bilood ah, Grasshopper waxay la shaqeysay PowerChord si ay u wanaajiso safarkeeda sumad-u-maxali ah iyada oo diiradda saareysa hogaaminta, abuurista summadaha dhijitaalka ah oo joogto ah, codsanaya otomaatiga, iyo taageeridda dadaallada iibiyayaasha suuqa. Grasshopper wuxuu kordhiyey hogaanka 500% iyo iibinta rasaasta laga dhaliyo onlaynka 80% sanadka ugu horeeya.
Halkan kala soo deg Daraasadda Dacwadda oo dhammaystiran
Adigaa Hogaaminta. Hadda waa maxay?
Mid ka mid ah caqabadaha ganacsiyada ay la kulmaan waa u beddelashada hogaanka iibka. Doolar suuqgeyneed oo muhiim ah ayaa lagu kharash gareeyaa soo jiidashada macaamiisha. Laakiin haddii aanad haysan nidaamyo aad kaga jawaabto hogaankii aad samaysay, markaas dollarku waa khasaaray. Cilmi-baaristu waxay muujinaysaa kaliya kala badh dhammaan hoggaanka ayaa dhab ahaantii lala xiriiriyay. Ka faa'iidayso dardargelinta xeeladaha suuqgeyneed adiga oo hirgelinaya hababka ugu wanaagsan ee maaraynta rasaasta si aad u saamayso iibkaaga.
Ka jawaab Hoggaan kasta - Tani waa markii aad wadaagi lahayd macluumaadka qiimaha leh ee ku saabsan alaabtaada ama adeeggaaga oo aad ka caawiso macaamilka si uu u gaaro go'aanka wax iibsiga. Sidoo kale waa waqtigii lagu heli lahaa hogaanka oo la go'aamin lahaa heerka xiisaha macmiil kasta oo suurtagal ah. Isticmaalka isgaadhsiinta khuseeya iyo kuwa la gaaryeelay waxay kor u qaadi doontaa beddelka.
Jawaabta degdega ah waa muhiim - Marka macaamiilku buuxiyaan foomka rasaasta, waxay diyaar u yihiin inay qaadaan tallaabada xigta ee socdaalkooda wax iibsiga. Waxay sameeyeen cilmi-baaris ku filan si ay u xiiseeyaan alaabtaada waxayna diyaar u yihiin inay kaa maqlaan. Sida laga soo xigtay InsideSales.com, suuqleyda la socota hoggaanka shabakada 5 daqiiqo gudahood waxay 9 jeer u badan tahay inay beddelaan.
Hirgelinta Hannaanka Dabagalka ah - Waa muhiim in la helo istaraatiijiyad qeexan oo lagula socdo hoggaanka. Ma rabto in aad lumiso fursadaha adiga oo aan si degdeg ah ula socon ama gebi ahaanba illoobin. Waxaa laga yaabaa inaad tixgeliso inaad ku maalgeliso CRM haddii aadan hore u haysan - habkan waxaad ku hayn kartaa taariikhaha la socodka, qoraallo faahfaahsan oo ku saabsan macaamilka, iyo xitaa dib-u-howlgeli iyaga taariikh dambe.
Ku dar Shuraakada Muhiimka ah ee Istaraatiijiyadaada - Summadaha iibiyeyaasha iibiya, iibku wuxuu u dhacaa qof ahaan heer deegaan. Taas macnaheedu waa iibiyaha maxaliga ahi waa barta taabashada ugu dambeysa ka hor xiritaanka. Ku xooji shabakada ganacsadahaaga qalab si aad uga caawiso xidhitaannada - haddii ay taasi tahay nuxurka ka dhigi doonta inay ku caqli badan yihiin alaabtaada ama xalalka tooska ah si ay uga caawiyaan maareynta hogaanka iyo wakhtiyada jawaabta.
</s>Ka hel ilo badan barta PowerChord
Tags: dealerfalanqaynta hogaanka dealerfalanqaynta dealershipfalanqaynta hogaanka dealershipwarbixinta hogaaminta baayacmushtarkaganacsiyada ganacsigacaws qoolleyjaranjarada cawskahogaanka falanqayntaqaybinta rasaastamaaraynta hogaamintakoronto
Stephanie Shreve waa madaxweyne ku xigeenka ka qaybgalka iskaashiga ee PowerChord. Iyadu waa software-ka iyo fulinta suuq-geynta dhijitaalka ah oo leh 20+ sano oo waayo-aragnimo ah hogaaminta kooxo wax-qabad sare leh si ay u taageeraan sumadaha caalamiga ah iyo la-hawlgalayaasha istiraatiijiga ah. Iyada oo la raacayo rikoodhka waxqabadka, Stephanie waxay ku dadaaleysaa inay dhisto xiriir adag macaamiisha si ay u abuurto xalal keena natiijooyinka ganacsiga. Waxay qabataa fursadaha ay soo bandhigaan tignoolajiyada soo baxaya si ay u gaaraan suuqyo cusub oo ay u koraan ganacsi.
ConvertMore: U beddelo booqashooyin badan oo shabakadeed Widget-ka wicitaanka taleefankan